ဒီဇင်ဘာလ 26, 2004, သာမန်တနင်္ဂနွေနဲ့တူသလိုပဲ။ တံငါသည်, ဈေးရောင်း, ဗုဒ္ဓဘာသာသီလရှင်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များနှင့်ဘာသာရေး - အားလုံးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဝှမ်းတဝိုက်, လူတွေသူတို့ရဲ့နံနက်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အကြောင်းကိုသွားလေ၏။ သူတို့ရဲ့ခရစ္စမတ်အားလပ်ရက်အပေါ်အနောက်တိုင်းခရီးသွားဧည့်များ၏ကမ်းခြေကြပါတယ် ထိုင်းနိုင်ငံ , သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ နှင့် အင်ဒိုနီးရှား ပူနွေးသောအပူပိုင်းနေရောင်နှင့်ပင်လယ်ပြာရေထဲမှာ reveling ။
သတိပေးမရှိရင် 7:58 pm မှာ, Banda-အာချေး၏ seafloor 250 ကီလိုမီတာ (155 မိုင်) အရှေ့တောင်ဘက်တစ်လျှောက်အမှား, ဆူမားတြား, အင်ဒိုနီးရှား၏ပြည်နယ်အတွက်, ရုတ်တရက်လမ်းကိုပေး၏။
တစ်ဦးကပြင်းအား 9.1 ရေအောက်မြေငလျင် 20 မီတာ (66 ပေ) တို့ကအထက်သို့ပင်လယ်ကြမ်းပြင်၏အစိတ်အပိုင်းများအိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်နှင့် (33 ပေ) 10 မီတာနက်ရှိုင်းသောသစ်တစ်ခုကောလဟလဖွင့်လှစ်ခြင်း, အမှား၏ 1200 ကီလိုမီတာ (750 မိုင်) တစ်လျှောက်တွင်ဝမ်းခွဲ။
ဤသည်ရုတ်တရက်လှုပ်ရှားမှုစွမ်းအင်တစ်ခုမသိမမြင်နိုင်သောငွေပမာဏကိုဖြန့်ချိ - ညီမျှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 550 သန်းဆ အဏုမြူဗုံး ဟာ seafloor အထက်သို့ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့အခါ 1945 ခုနှစ်ဟီရိုရှီးမားပေါ်ကျဆင်းသွားပါကတစ်ဦးစီးရီးစေသော ကြီးမားဂယက် အကြောင်း, တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် - အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာ ဆူနာမီ ။
အဆိုပါငလျင်ဗဟိုချက်မှာအနီးဆုံးလူများတွေ့ရှိနေရသည်ကပ်ဆိုးကြီးနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောသတိပေးခဲ့ - အားလုံးအပြီး, ထိုသူတို့အစွမ်းထက်မြေငလျင်ခံစားရတယ်။ သို့သော်ဆူနာမီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာအဆန်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, လူတွေကဘယ်လိုတုံ့ပြန်ဖို့လောက်ပဲ 10 မိနစ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမဆူနာမီသတိပေးချက်များရှိခဲ့သည်။
8:08 pm တွင်န်းကျင်, ပင်လယ်ရုတ်တရက်မြောက်ပိုင်းဆူမားတြား၏မြေငလျင်-ပျက်စီးကမ်းခြေကနေပြန်ဆွဲငင်။ ထို့နောက်လေးကြီးမားတဲ့လှိုင်းတံပိုး၏စီးရီး, ကမ်းခြေအရပ်ရှည်ရှည် 24 မီတာ (80 ပေ) မှာမှတျတမျးတငျထားတဲ့အမြင့်ဆုံးပျက်ကျသွားသည်။
လှိုင်းတံပိုးတို့သည်ရေတိမ်ပိုင်းထိပြီးတာနဲ့အချို့နေရာများမှာဒေသခံပထဝီအဖြစ်တာ 30 မီတာ (100 ပေ) ရှည်ပင်ပိုကြီးတဲ့မိကျောင်းသို့သူတို့ကိုငါသည့်။
အဆိုပါပင်လယ်ရေလူ့အဆောက်အဦများ၏ရှင်းလင်းသောအင်ဒိုနီးရှားကမ်းရိုးတန်း၏ကြီးမားသောဒေသများ scouring, သူတို့ရဲ့သေဆုံးမှုမှခန့်မှန်းခြေ 168.000 ကလူဝေးတင်ဆောင်လာသော, ကုန်းတွင်းပိုင်းကိုဟုန်းစေသော။
တစ်နာရီအကြာမှာလှိုင်းတံပိုးကိုထိုင်းနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိ; နေဆဲ unwarned နှင့်အန္တရာယ်မသိ, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 8.200 ကလူ 2500 နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်အပါအဝင်ဆူနာမီရေနားမှာဖမ်းမိခဲ့သည်။
လှိုင်းတံပိုးနိမ့်-လဲလျောင်းသိမျး မော်လ်ဒိုက်ကျွန်းစု ရှိ 108 လူတွေကိုသတ်ဖြတ်,, ပြီးတော့မှအပေါ်ပွေးအလှားသှားရငျး အိန္ဒိယ အနေနဲ့နောက်ထပ် 53,000 နှစျနာရီခနျ့ငလျင်အပြီးပျောက်ပျက်ဘယ်မှာနှင့်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ။ လှိုင်းတံပိုးနေဆဲ 12 မီတာ (40 ပေ) ရှည်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆူနာမီအချို့ခုနစ်ခုနာရီအကြာအရှေ့အာဖရိက၏ကမ်းခြေလုပ်ကြံလေ၏။ အချိန်ချုံးနေသော်လည်းအာဏာပိုင်များဆိုမာလီယာ, ဒါဂတ်စကာ, ထိုဆေးရှဲ, ကင်ညာ, တန်ဇန်းနီးယားနဲ့တောင်အာဖရိက၏လူများကိုသတိပေးစရာလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားဝေးမှာရှိတဲ့ငလျင်ကနေစွမ်းအင်, အာဖရိကရဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်ကွာဆိုမာလီယာရဲ့ Puntland ဒေသတွင်အများစုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 300 400 မှလူဦးဆောင်သွားကြ၏။
စုစုပေါင်းခန့်မှန်းခြေ 230,000 260,000 လူတွေကို 2004 ခုနှစ်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာငလျင်နှင့်ဆူနာမီအတွက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါငလျင်ကြောင့်သူ့ဟာသူတတိယအာဏာအရှိဆုံး 1900 ကတည်းကရှိခဲ့သည်, Alaska (ပြင်းအား 9.2), သာ 1960 ၏မဟာချီလီငလျင် (ပြင်းအား 9.5) နှင့်မင်းသားဝီလျံအသံအတွက် 1964 ခုနှစ်ကောင်းမွန်သောသောကြာနေ့ငလျင်ကျော်လွန်; သူတို့အားငလျင်နှစ်ခုလုံးကိုလည်းပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအင်တုံထဲမှာလူသတ်သမားဆူနာမီကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောလူတွေဒီဇင်ဘာလ 26, 2004 တွင်သေခဲ့တာလဲ ဆူနာမီသတိပေးအခြေခံအဆောက်အဦများမရှိခြင်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်သိပ်သည်းကမ်းရိုးတန်းလူဦးရေကဤကြောက်မက်ဖွယ်ရလဒ်ထုတ်လုပ်ရန်စုဝေးရောက်လာကြ၏။ ဆူနာမီပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိပိုပြီးဘုံများမှာကတည်းကကြောင်းသမုဒ္ဒရာဒေသအနှံ့ဝတ်ဆင်ဆူနာမီ-detection စနစ်ဗော်ယာကနေသတင်းအချက်အလက်တုံ့ပြန်ရန်အဆင်သင့်, ဆူနာမီသတိပေးဒီတခါကြားနေရတန်းဖြစ်၏ဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာငလျင်တက်ကြွဖြစ်သော်လည်းကအတူတူပင်လမ်းအတွက်ဆူနာမီထောက်လှမ်းဘို့ကြိုးမခဲ့ - သည်၎င်း၏အကြီးအကျယ်-လူဦးရေနှင့်အနိမ့်သောသဘောကိုမုသာကမ်းရိုးတန်းဒေသများရှိနေသော်လည်း။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် 2004 ဆူနာမီရဲ့သားကောင်များ၏ကြီးစွာသောအများစုဗော်ယာများနှင့်ဒီတခါကြားနေရသဖြင့်သိမ်းဆည်းထားလိုက်ပြီလို့မရဘူး။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ဝေးနေဖြင့်အကြီးဆုံးသေဆုံးသူလူပေါင်းရုံအကြီးအကျယ်ငလျင်လှုပ်ခြင်းဖြင့်လှုပ်ခါနှင့်မြင့်မားသောမြေပြင်ကိုရှာဖွေမှသာမိနစ်ရှိခဲ့ခဲ့ရှိရာအင်ဒိုနီးရှား, ၌ရှိ၏။
သို့သျောလညျးကိုအခြားနိုင်ငံများတွင်ထက်ပိုမို 60,000 လူတွေသိမ်းဆည်းပြီးပြီနိုငျဘဲ, သူတို့သွား shoreline ကနေပြောင်းရွှေ့ဖို့အနည်းဆုံးတစ်နာရီခဲ့ကြလိမ့်မယ် - သူတို့ကတချို့သတိပေးခဲ့လျှင်။ 2004 ကတည်းကနှစ်များတွင်အရာရှိများအနေနဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဆူနာမီသတိပေးခြင်း System ကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ။ မျှော်လင့်, ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအင်တုံ၏, လူများဘယ်တော့မှနောက်တဖန်သူတို့၏ကမ်းခြေဆီသို့ရေစည် 100 ပေနံရံများစဉ်အမှတ်တမဲ့ဖမ်းမိပါလိမ့်မည်ဆိုတာသေချာပါလိမ့်မယ်။
ဒုတိယ Punic စစ်ပွဲ၏တိုက်ပွဲများ
ချားလ်စ် V ကို၏ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအောင်မြင်သော: စပိန် 1516-1522
ဖိလစ်ပိုင် Manuel Quezon
Reiki 101: ကုသမှုစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
မြစ်ချောင်းများ: Source မှစ. ပင်လယ်
"ကီ" သီချင်း - Kyuu Sakamoto အားဖြင့် "Muite Arukou ဏ Ue"
သင့်ရဲ့ကားပေါ်တွင်တစ်ဦး Squealing ခါးပတ်တိတ်ဆိတ်လုပ်နည်း
ကမ္ဘာ့ Snarkiest လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံမှရယ်စရာရုံးမှတ်စုများ
ပြင်သစ် Subjunctive - က Le Subjonctif - စည်းကမ်းများနှင့်ဥပမာများ
1890 ကနေ 1900 မှ timeline
အဓိပ္ပာယ်နှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့ Subjunctive Mood ၏ဥပမာများ
နှင်းလျှောစီး LIFT အမျိုးအစားများ
နာမဝိသေသန + preposition
Juz '' 26 ကုရ်အာန်၏